လကျစတာ နဲ့ ယူနိုကျတကျပှဲအတှကျ အရေးကွီးသတငျး ဆွာလှဲရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြ…. – Premier League Special
အိုလဂေနျနား ဆိုးရှားရဲ့ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျက အိုးထရတျဖို့ဒျ လိဒျအသငျးကို (၆ – ၂) ဂိုး အနိုငျရရှိပွီးနောကျ ခနျြပီယံဆုကို စိနျချေါနိုငျတဲ့အသငျးအဖွဈ လူပွောမြားလာတာ တှရေ့တယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ ကွားရကျတုနျးကလညျး အဲဗာတနျအသငျးကို နောကျကသြှငျးဂိုး(၂)ဂိုးရယူခဲ့ပွီး ကာရာဘောငျဖလား ဆီမီးဖိုငျနယျကိုလညျးတကျရောကျသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
ပရီမီးယားလိဂျမှာ ယူနိုကျတကျအနနေဲ့ တဈပှဲလြော့ ကစားထားပွီး အဆိုပါ ပှဲစဉျကို အနိုငျရရှိပါက လကျရှိအခြိနျမှာ အမှတျပေးဇယား အဆငျ့ ( ၂ ) နရောကို ရောကျရှိနမှော ဖွဈပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး ( ၆ ) ပှဲမှာ ( ၅ ) ပှဲထိ အနိုငျရထားပွီး အရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ ဆကျလကျ တိုကျပှဲဝငျနပေါတယျ။ အဝေးကှငျးပှဲတှမှောလညျး (၁၃)ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ ယူနိုကျတကျအတှကျ လကျစတာအသငျးနဲ့ပှဲစဉျဟာ သူတို့အသငျးရဲ့ အဝေးကှငျးစံခြိနျကို ဆကျလကျ ရေးထိုးနိုငျအုံးမှာလား…?
တဈဖကျမှာ လကျစတာ အသငျးကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျက မျောရငျဟို ရဲ့စပါးအသငျးကို ဗာဒီရဲ့ ပငျနယျတီသှငျးဂိုး ၊ စပါးနောကျခံလူ အယျဒါဝီရယျက ဗာဒီရဲ့ခေါငျးတိုကျ ဂိုးသှငျးယူမှုကို ဖွတျထုတျရာကနေ ကိုယျဂိုးကိုယျပွနျသှငျးယူမိခဲ့တာတှကွေောငျ့ စပါးအသငျးကို (၂)ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွီး လကျစတာက အမှတျပေးဇယားရဲ့အဆငျ့(၂)နရောထိကိုတကျရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဇယားထိပျက လီဗာပူးအောကျ ( ၄ )မှတျလြော့ အနအေထားနဲ့ အဆငျ့ ( ၂ ) နရောမှာ ရပျတညျနပေါတဲ့ လကျစတာဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ( ၁၄ ) ပှဲမှာ ( ၅ ) ပှဲထိ ရှုံးနိမျ့ထားပွီး အိမျကှငျး King Power မှာ ( ၄ ) ပှဲ ရှုံးနိမျ့ထားပါတယျ။
ပှဲကွိုခနျ့မှနျးခကျြတှမှော ပရိသတျတှလေကျဖြားခါရလောကျအောငျလှဲနတေဲ့ မိုကျကယျအိုဝငျက ဘောကျဆငျဒေးပှဲစဉျမှာ ယူနိုကျတကျ နှငျ့ လကျစတာတို့ တဈဖကျတဈဂိုးစီ သရကေမြယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ” ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျတှမှော ယူနိုကျတကျရဲ့ ခွစှေမျးက အသကျဝငျလာပါတယျ။ ” လို့ အိုဝငျက BetVictor ကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
” ယူနိုကျတကျက အဆငျ့ ( ၃ ) မှာ ရပျတညျနတေယျ။ ပှဲကနျြတဈပှဲကို အနိုငျကစားနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ အဆငျ့ ( ၂ ) နရောထိ တကျလှမျးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ ဆိုးရှားရဲ့ အသငျးက ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ဒီရာသီရဲ့ ( ၁၁ ) ကွိမျမွောကျ အဝေးကှငျးနိုငျပှဲ ဆကျနိုငျဖို့ ကွိုးစားလာမှာပါ။ ”
” လကျစတာက အိမျကှငျးမှာ အဲဗာတနျကို ရှုံးနိမျ့ပွီးနောကျ အဝေးကှငျးမှာ စပါးကို အနိုငျကစားထားတယျ။ ဒီပှဲစဉျမှာတော့ ( ၂ ) သငျးစလုံး သှငျးဂိုး ကိုယျစီ ရယူနိုငျပွီး သရရေလဒျ ထှကျပျေါလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးပါတယျ။”
ဒီနှဈသငျးရဲ့ (၂၀၂၀) ရဲ့ နောကျဆုံးပှဲစဉျတှကေတော့ လကျစတာအသငျးဟာ တနင်ျလာနညေ့(၉း၃၀)မှာ ခရစ်စတယျပဲလရေဲ့ ကှငျးမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျအသငျးက အင်ျဂါည (ဗုဒ်ဓဟူးနံနကျ ၂း၃၀) မှ ဝုဗျအသငျးနဲ့ ကစားရမှာ ဖွဈတာကွောငျ့ လကျစတာအသငျးအတှကျကတော့ ယူနိုကျတကျအသငျးထကျ ပှဲရကျပိုကွပျပါတယျ။
လက်စတာ နဲ့ ယူနိုက်တက်ပွဲအတွက် အရေးကြီးသတင်း ဆြာလွဲရဲ့ ခန့်မှန်းချက်….
အိုလေဂန်နား ဆိုးရှားရဲ့ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က အိုးထရတ်ဖို့ဒ် လိဒ်အသင်းကို (၆ – ၂) ဂိုး အနိုင်ရရှိပြီးနောက် ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အသင်းအဖြစ် လူပြောများလာတာ တွေ့ရတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ကြားရက်တုန်းကလည်း အဲဗာတန်အသင်းကို နောက်ကျသွင်းဂိုး(၂)ဂိုးရယူခဲ့ပြီး ကာရာဘောင်ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုလည်းတက်ရောက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ပရီမီးယားလိဂ်မှာ ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ တစ်ပွဲလျော့ ကစားထားပြီး အဆိုပါ ပွဲစဉ်ကို အနိုင်ရရှိပါက လက်ရှိအချိန်မှာ အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ( ၂ ) နေရာကို ရောက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး ( ၆ ) ပွဲမှာ ( ၅ ) ပွဲထိ အနိုင်ရထားပြီး အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။ အဝေးကွင်းပွဲတွေမှာလည်း (၁၃)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ယူနိုက်တက်အတွက် လက်စတာအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ဟာ သူတို့အသင်းရဲ့ အဝေးကွင်းစံချိန်ကို ဆက်လက် ရေးထိုးနိုင်အုံးမှာလား…?
တစ်ဖက်မှာ လက်စတာ အသင်းကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မော်ရင်ဟို ရဲ့စပါးအသင်းကို ဗာဒီရဲ့ ပင်နယ်တီသွင်းဂိုး ၊ စပါးနောက်ခံလူ အယ်ဒါဝီရယ်က ဗာဒီရဲ့ခေါင်းတိုက် ဂိုးသွင်းယူမှုကို ဖြတ်ထုတ်ရာကနေ ကိုယ်ဂိုးကိုယ်ပြန်သွင်းယူမိခဲ့တာတွေကြောင့် စပါးအသင်းကို (၂)ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြီး လက်စတာက အမှတ်ပေးဇယားရဲ့အဆင့်(၂)နေရာထိကိုတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဇယားထိပ်က လီဗာပူးအောက် ( ၄ )မှတ်လျော့ အနေအထားနဲ့ အဆင့် ( ၂ ) နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတဲ့ လက်စတာဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ( ၁၄ ) ပွဲမှာ ( ၅ ) ပွဲထိ ရှုံးနိမ့်ထားပြီး အိမ်ကွင်း King Power မှာ ( ၄ ) ပွဲ ရှုံးနိမ့်ထားပါတယ်။
ပွဲကြိုခန့်မှန်းချက်တွေမှာ ပရိသတ်တွေလက်ဖျားခါရလောက်အောင်လွဲနေတဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်က ဘောက်ဆင်ဒေးပွဲစဉ်မှာ ယူနိုက်တက် နှင့် လက်စတာတို့ တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီ သရေကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ” ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တွေမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခြေစွမ်းက အသက်ဝင်လာပါတယ်။ ” လို့ အိုဝင်က BetVictor ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
” ယူနိုက်တက်က အဆင့် ( ၃ ) မှာ ရပ်တည်နေတယ်။ ပွဲကျန်တစ်ပွဲကို အနိုင်ကစားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဆင့် ( ၂ ) နေရာထိ တက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဆိုးရှားရဲ့ အသင်းက ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဒီရာသီရဲ့ ( ၁၁ ) ကြိမ်မြောက် အဝေးကွင်းနိုင်ပွဲ ဆက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလာမှာပါ။ ”
” လက်စတာက အိမ်ကွင်းမှာ အဲဗာတန်ကို ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် အဝေးကွင်းမှာ စပါးကို အနိုင်ကစားထားတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ ( ၂ ) သင်းစလုံး သွင်းဂိုး ကိုယ်စီ ရယူနိုင်ပြီး သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်။”
ဒီနှစ်သင်းရဲ့ (၂၀၂၀) ရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကတော့ လက်စတာအသင်းဟာ တနင်္လာနေ့ည(၉း၃၀)မှာ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့ရဲ့ ကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းက အင်္ဂါည (ဗုဒ္ဓဟူးနံနက် ၂း၃၀) မှ ဝုဗ်အသင်းနဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် လက်စတာအသင်းအတွက်ကတော့ ယူနိုက်တက်အသင်းထက် ပွဲရက်ပိုကြပ်ပါတယ်။